ငါးမွေးကန်များအတွက်အကောင်းဆုံး AquaClear filter များ၊ ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးမလဲ။ အ | ငါးများ
AquaClear filter များ
AquaClear filter များသည်ငါးပြတိုက်လောကတွင်ခဏနေခဲ့ဖူးသူတိုင်းနှင့်တူလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်ငါးပြတိုက် filtering တွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်များဟုလည်းလူသိများသော၎င်းတို့၏ကျောပိုးအိတ်စစ်ထုတ်များကိုအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးထားပြီးရပ်ရွာတစ်ခုလုံးကအသုံးပြုကြသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ AquaClear filter များအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမည်သူတို့ရဲ့ပုံစံအချို့ကိုငါတို့အကြံပြုလိမ့်မယ်၊ သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုတာသင်ပေးမယ်။ ဤဆက်စပ်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ငါးပြတိုက်အတွက် osmosis filter၊ သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ.
1 အကောင်းဆုံး AquaClear filter များ
1.1 AquaClear ၂၀
1.2 AquaClear ၂၀
1.3 AquaClear ၂၀
1.4 AquaClear ၂၀
2 AquaClear filter တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
3 AquaClear Filter အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအမျိုးအစားများ
3.2 ဓာတု filtration
4 AquaClear သည်ငါးပြတိုက်များအတွက် filter အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းတစ်ခုလား။
5 AquaClear filter များသည်ဆူညံနေသလား။
6 AquaClear filter ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ
7 filter load များကိုသင်မည်မျှပြောင်းလဲရန်လိုသနည်း။
အကောင်းဆုံး AquaClear filter များ
၏ AquaClear စနစ် ...
AquaClear A610 - စနစ် ...
AquaClear စစ်ထုတ်မှုတာဝန်ခံ ...
နောက်ကျနော်တို့မြင်ရလိမ့်မည် ဤအမှတ်တံဆိပ်၏အကောင်းဆုံး filter များမရ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရည်အသွေးများရှိသော်လည်းကွဲပြားမှုကိုငါးပြတိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်မည့်အများဆုံးလီတာနှင့်တစ်နာရီလျှင်လီတာအရေအတွက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဤ filter သည်ပုံမှန် AquaClear အရည်အသွေးအားလုံးပါ ၀ င်သည်၇၆ လီတာထက်မပိုသောငါးပြတိုက်များအတွက်အလွန်အသံတိတ်စနစ်အပြင်၎င်း၏စစ်ထုတ်မှုပုံစံသုံးမျိုးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်တစ်နာရီလျှင်လီတာ ၃၀၀ ထက်ပိုသောလည်ပတ်မှုနှုန်းရှိသည်။ ၎င်းသည်စုစည်းရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့်နေရာကိုမဆိုယူသည်။
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ငါးပြတိုက်များတွင် ၁၁၄ လီတာအထိတပ်ဆင်နိုင်သည်၎င်းသည်တစ်နာရီလျှင်လီတာ ၅၀၀ ကျော်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ AquaClear filter များအားလုံးကဲ့သို့အသံတိတ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောစစ်ထုတ်ခြင်းသုံးမျိုး (စက်မှု၊ ဓာတုနှင့်ဇီဝဗေဒ) တို့ပါ ၀ င်သည်။ AquaClear ဖြင့်သင်၏ငါးပြတိုက်ရှိရေသည်ရိုးရှင်းကြည်လင်လိမ့်မည်။
AquaClear filter ၏ဤပုံစံသည် အခြားသူများနှင့်တူညီသော်လည်း ၁၉၀ လီတာအထိငါးပြတိုက်များတွင်သုံးရန်အကြံပြုသည်မရ။ ၎င်းသည်တစ်နာရီလျှင်လီတာ ၇၀၀ ခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အခြားမော်ဒယ်များကဲ့သို့ AquaClear 700 တွင်ရေစီးဆင်းမှုကိုသင်လျှော့ချပေးနိုင်သောစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ထိုအခါငါတို့သည်အတူတက်အဆုံးသတ် ၂၆၅ လီတာအထိငါးပြတိုက်ထက်ပိုမသုံးနိုင်သည့်ဤအမှတ်တံဆိပ်၏ filter များ၏အကြီးဆုံးမော်ဒယ်မရ။ ဤစစ်ထုတ်စက်သည်တစ်နာရီလျှင်လီတာတစ်ထောင်ထက်မနည်းကိုစီမံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်စရာစွမ်းအားကိုသေချာစေသောအခြားသူများထက်များစွာပိုကြီးသည် (အချို့မှတ်ချက်များက၎င်းတို့ကိုအနိမ့်ဆုံးသို့ညှိပေးသည်ဟုပြောကြသည်)
AquaClear filter တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
AquaClear filter များသည်ဘာတွေလဲ ကျောပိုးအိတ် filter များဟုလူသိများသည်မရ။ ဤအမျိုးအစားများသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးပြတိုက်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ၎င်းတို့သည်အပေါ်ပိုင်းအစွန်းများ (ဤနေရာမှသူတို့၏အမည်) တွင်တင့်ကားအပြင်ဘက်တွင်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ငါးပြတိုက်အတွင်းနေရာမယူပါ၊ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုကြီးမားသောငါးပြတိုက်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပြင်ပစစ်ထုတ်များကဲ့သို့ထုထည်ကြီးမားသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်၎င်း၏အောက်စီဂျင်ဓာတ်ကိုတိုးတက်စေသောရေတံခွန်တစ်မျိုး၌ရေကိုချလိုက်သည်။
AquaClear filter သည် filter အများစုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည် ဒီအမျိုးအစား:
ပထမဦးစွာ ရေသည်ပလတ်စတစ်ပြွန်မှတဆင့် ၀ င်သည် filter ထဲသို့ဝင်သည်။
ထိုအခါ ကိရိယာသည်အောက်ခြေမှအပေါ်သို့စစ်ထုတ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည် ရေသည်မတူညီသောစစ်ထုတ်စက်သုံးခု (ငါတို့ကနောက်မှပြောကြလိမ့်မည်)၊ စက်မှု၊ ဓာတုဗေဒနှင့်ဇီဝဗေဒတို့ဖြတ်သန်းသည်။
ဤအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်၏ filter များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာ၎င်းတို့တွင်ကွဲပြားသော filter သုံးခုအပြင်aပါ ၀ င်သည် ရေစီးဆင်းမှုကို ၆၆% အထိလျှော့ချပေးနိုင်သော flow control (ဥပမာ၊ မင်းငါးကိုအစာကျွေးတဲ့အခါ) စစ်ထုတ်မော်တာသည်မည်သည့်အချိန်မဆိုအလုပ်မလုပ်ပါ၊ စီးဆင်းမှုလျော့ကျသွားလျှင်ပင်စစ်ထုတ်ထားသောရေ၏အရည်အသွေးသည်လည်းကျဆင်းသွားမည်မဟုတ်ပေ။
AquaClear Filter အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအမျိုးအစားများ
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ AquaClear filter များတွင်အညစ်အကြေးအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန် filtering system သုံးခုရှိသည် ရေကိုတတ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
AquaClear ကာဗွန်တင်နေသည် ...
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် filter သည်အလုပ်လုပ်သောအခါပထမဆုံးစတင်သော filtration ဖြစ်ပြီး၊ အကြီးဆုံးအညစ်အကြေးများကိုထောင်ချောက်ဆင်သည် (ဥပမာ၊ မစင်၊ အစာ၊ ဆိုင်းငံ့သဲ ... ) စက်၏စစ်ထုတ်မှုကြောင့်ရေသည်သန့်ရှင်းနေရုံသာမကသုံးမျိုးလုံး၏အရှုပ်ထွေးဆုံးနှင့်အသိမ်မွေ့ဆုံးသောစစ်ထုတ်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောနည်းဖြင့်ဇီဝသန့်စင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိစေသည်။ AquaClear ၏ကိစ္စတွင်ဤစစ်ထုတ်ကိုအမြှုပ်များဖြင့်ဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စက်၏စစ်ထုတ်မှုကိုမြှင့်တင်ထားသောအမြှုပ်အထက်၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည် activated ကာဗွန်ပါဝင်သောဓာတုဗေဒစစ်ထုတ်ခြင်းမရ။ ဤစစ်ထုတ်မှုစနစ်သည်အဘယ်အရာကိုစက်၌စစ်ထုတ်မှုမှထောင်ချောက်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသောအလွန်သေးငယ်သောအမှုန်များကိုဖယ်ရှားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ငါးကိုဆေးလိမ်းပြီးနောက်ရေကိုသန့်ရှင်းလိုသောအခါ၎င်းသည်ကျန်ရှိသောဆေးများကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်အနံ့ဆိုးများကိုဖယ်ရှားရန်လည်းအသုံးဝင်သည်။ ဤ filter ကိုရေချိုငါးပြတိုက်များတွင်သုံးရန်မထောက်ခံပါ။
AquaClear အားသွင်း ...
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနူးညံ့ဆုံးသောစစ်ထုတ်မှု၊ ဇီဝဗေဒကိုတွေ့သည်။ AquaClear တွင်သုံးသောကြွေပြွန်များဖြစ်သော Biomax တွင်နေထိုင်သောဘက်တီးရီးယားများသည်ဤစစ်ထုတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ canutillos တွင်ထားရှိသောဘက်တီးရီးယားများသည်သင်၏ငါးပြတိုက်အားကောင်းမွန်ပြီးသင်၏ငါးများကိုပျော်ရွှင်စေရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုရောက်လာသောအမှုန်များ (ဥပမာအားဖြင့်အပင်များပြိုကွဲခြင်း) သို့အဆိပ်ဖြစ်စေသောဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင် AquaClear မှပေးသောဇီဝဗေဒစစ်ထုတ်မှုကို၎င်းအားလတ်ဆတ်သောဆားငန်ငါးပြတိုက်နှစ်ခုလုံးတွင်သုံးနိုင်သည်။
AquaClear သည်ငါးပြတိုက်များအတွက် filter အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းတစ်ခုလား။
AquaClear သည်သေချာသည် ငါးမွေးကန်များလောကတွင်စတင်လေ့လာသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအမှတ်တံဆိပ်မရ။ ၎င်းတို့သည်သမိုင်းကြောင်းများရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုဥပမာများ (online (သို့) တိရိစ္ဆာန်များစတိုးဆိုင်များတွင်) နေရာများစွာ၌ရရှိနိုင်ရုံသာမကအင်တာနက်၌ပျံ့နှံ့နေသောထင်မြင်ချက်များအားလုံး၌အချက်များစွာရှိသည်။ ဘုံဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့မှာ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောစစ်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောဂန္ထဝင်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
AquaClear filter များသည်ဆူညံနေသလား။
AquaClear filter များသည်အတော်လေးတိတ်ဆိတ်သောကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ရိုက်ကူးရေးအချို့ရှိနေသေးသဖြင့်အသုံးပြုမှုပထမနေ့ရက်များတွင်၎င်းတို့သည်အသံမြည်လေ့ရှိသည်။
ဒီလောက်အသံမထွက်အောင်လှည့်ကွက်တစ်ခုက filter ကငါးမွေးကန်ရဲ့ဖန်ခွက်ပေါ်မှာမတည်မနေစမ်းဖို့၊ ကြိမ်ဖန်များစွာသည်တုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံကိုဖြစ်စေသောဤအဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်အနည်းငယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ဖန်ခွက်မှစစ်ထုတ်ကိုရာဘာကွင်းများဖြင့်ခွဲထုတ်ပါ။ စစ်ထုတ်မှု၏တည်နေရာသည်အလွန်ဆူညံသံမဖြစ်စေရန်၊ ၎င်းကိုလုံး ၀ ဖြောင့်ဖြောင့်ထားရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ဆူညံသံများစွာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက၎င်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အကြံပြုသည် တာဘိုင်နှင့်မော်တာရိုးကြားတွင်အချို့အစိုင်အခဲအကြွင်းအကျန်များ (တာရစ်ကဲ့သို့).
AquaClear filter ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ
AquaClear filter များအားလုံးကဲ့သို့ filter များ၊ အခါအားလျော်စွာသန့်ရှင်းသင့်သည်မရ။ ငါးပြတိုက်တစ်ခုစီနှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်တို့အပေါ်မူတည်သည်၊ သို့သော်သင်မကြာခဏလုပ်ရမှာကထွက်ပေါက်စီးဆင်းမှုကျဆင်းခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ပတ်တိုင်း) စုပြုံနေသောအခါသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းသင်သိလိမ့်မယ်။
ပထမ ဦး စွာသင်လုပ်ရလိမ့်မည် filter ကိုဖြုတ်ပါ မျှော်လင့်မထားသောမီးပွားများသို့မဟုတ်ပိုဆိုးမသွားစေရန်။
Después filter အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပါ (ကာဗွန်မော်တာ၊ ကြွေပြွန်များနှင့်စစ်ထုတ်ရေမြှုပ်) အမှန်စင်စစ် AquaClear တွင်အရာအားလုံးသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်ငါးမိနစ်ထက်မပိုသောအဆင်ပြေသည့်တောင်းတစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးဖြစ်သည်။
ငါးပြတိုက်ရေကိုသင်သုံးရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ရေမြှုပ်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းပါ filter ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဥပမာ၊ သင်ကရေကိုသုံးရင်အဲဒါတွေကညစ်ညမ်းလာပြီး filter ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
သင်ထပ်လုပ်ရန်လည်းအရေးကြီးသည် အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထားပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဖုံးကကောင်းကောင်းပိတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် filter ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ filter ကိုမတပ်ပါနှင့်အခြောက်ခံပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အပူလွန်ကဲပြီးပူလောင်လာမယ်။
filter load များကိုသင်မည်မျှပြောင်းလဲရန်လိုသနည်း။
ပုံမှန်အားဖြင့် filter load များကိုအခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲပေးရမည် သို့မှသာ filter သည်၎င်း၏အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်လျှင်စုဆောင်းမိသည့်အပျက်အစီးပမာဏသည် filtrate ၏အရည်အသွေးနှင့်ရေစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အမြဲလိုလိုပင်ငါးပြတိုက်၏စွမ်းရည်ပေါ်များစွာမူတည်နေသော်လည်းအသုံးအများဆုံးမှာ -
ပြောင်းလဲပါ ရေမြှုပ် နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်တိုင်း၊ သို့မဟုတ်စေးကပ်လာပြီးပျက်သောအခါ
ပြောင်းလဲပါ filtro de carbón activo ဖြစ်သည် တစ်လတစ်ခါလောက်တော့
အ ကြွေ grommets ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲရန်မလိုပါ။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများရှင်သန်လေလေ၊ သူတို့ကသူတို့စစ်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လေဘဲ။
AquaClear filter များသည်သင်၏ငါးပြတိုက်ကိုစစ်ထုတ်ရန်အရည်အသွေးရှိသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီလောကမှာအသစ်အဆန်းတွေအတွက်ရောပညာရှင်တွေအတွက်ရော၊ သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့ငါးမွေးကန် (သို့) သမုဒ္ဒရာကိုကိုယ်တိုင်ယှဉ်နိုင်တဲ့သူတွေရောအတွက်ပါ။ မင်းရဲ့ငါးပြတိုက်မှာမင်းဘယ် filter တွေကိုသုံးလဲပြောပြပါ။ တခုခုကိုသင်အကြံပေးပါသလား။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » ပစ္စည်းများ » AquaClear filter များ
Aquarium ကျောပိုးအိတ် filter များ